व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा के भयो प्रगति ? | mulkhabar.com
April 9, 2018 | 8:49 am 255 Hits
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डामा ‘व्यापार घाटा’ पनि सूचीकृत थियो । प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणले भारततर्फको डरलाग्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका विषयमा ठोस सम्झौता भने हुन सकेन । संयुक्त वक्तव्यमा पनि व्यापार घाटाको विषय उल्लेख गरिएको छैन । यसले भ्रमणबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठोस प्रगति नभएको टिप्पणी गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भ्रमणका कतिपय उपलब्धि सकारात्मक भए पनि धान्नै नसकिने व्यापार घाटामा मौनता भने खड्किएको बताएका छन् । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको अति चासोको विषय मानिएको अकासिँदो व्यापार घाटा उल्लेख नभएको औँल्याएका छन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त वक्तव्यमा नआएका धेरै सकारात्मक कुरा भएको र ती लिखितमा आउने बताए । भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा छलफल भएको र दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने समझदारी भएको बताए ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भारततर्फको व्यापार घाटा उच्चदरमा बढ्दै गएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने छिमेकी मुलुक भारततर्फ निर्यातको तुलनामा आयात वृद्धि उच्च हुँदा व्यापार घाटा डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ । नेपालको कुल व्यापार घाटाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पनि भारतकै रहेको छ ।
सात महिनामा चार खर्ब घाटा
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामै नेपालले भारतसँग ४ खर्ब ५ अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । यस अवधिमा नेपालले ४ खर्ब ३२ अर्बको वस्तु आयात गरेर २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा ३५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा वृद्धिदर अझ बढ्ने देखिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालले भारतसँगको व्यापारमा कुल ५ खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । यो नेपालको कुल व्यापार घाटाको ६४.६ प्रतिशत हिस्सा हो । उक्त आवमा नेपालले भारततर्फ ४१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको मालवस्तु निर्यात गरेको थियो ।
जबकि, सोहि अवधिमा भारतबाट नेपालमा ६ खर्ब ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरका मालवस्तु आयात भए । यस अवधिमा निर्यातको वृद्धिदर ५ प्रतिशत मात्रै रह्यो, तर आयात वृद्धिदर भने ३२.३ प्रतिशत पुग्यो । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा भारतसँगको व्यापार घाटा अत्यधिक भएको हो ।